Be tsy andraofana - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Be tsy andraofana
Ny alarobia 9 janoary izao no fe-potoana farany voafaritry ny lalàna fa tokony hametrahana ireo antontan-taratasy manamarina ny fijoroan’izy ireo eny anivon’ny minisiteran’ny Atitany. Isan’ny fepetra vaovao napetraky ny lalàna mifehy ny antoko politika ny tsy maintsy hananana tetikasam-pampandrosoana ny firenena sy ny fananana mpikambana 200 fara fahakeliny.
Raha ny voalaza dia antoko 10 amin’ireo 25 efa nanatitra antontan-taratasy fanamarinana ny maha ara-dalàna ny fijoroany ihany no mahafeno ny fepetra hatreto ary tsy mbola tafiditra ao anatin’izay ireo antoko heverina ho goavana amin’izao fotoana izao, tahaka ny Tim sy ny Tgv.
Efa daty napetraky ny lalàna ilay 9 janoary fa azo antoka fa tsy maintsy hisy fanalavam-potoana noho ny tsy mbola maha ara-dalàna an’ireo antoko goavam-be. Izany lalàna izany anie hoy aho ka toa natao hodikaina mihitsy raha ny misy eto amintsika e !
Bao tsy mivily, Mpanoratra Rijakely, 07.01.2013, 09:40	FIARAHAMONINA